Emelie Rasendrasoa, mahavita miady amin'ny COVID-19 na eo aza ny kilemany | UNICEF Madagasikara
Emelie Rasendrasoa, mahavita miady amin'ny COVID-19 na eo aza ny kilemany
Antananarivo, 16 septambra 2020. Emelie Rasendrasoa, maty vady ary 49 taona, dia malemy tongotra, satria nalemy tanteraka ny tapany ambany efa ho herintaona izao. Izany kilema izany dia nahazo azy taorian'ny fitsaboana izay narahany tamin’ny alalàn’ny tsindrona. Raha tsy mampiasa tehina (béquilles) i Emelie dia tsy afaka mamindra irery izy ary tsy maintsy entin'ny havany. Rehefa tratran’ity fahasembanana ity i Emelie dia mipetraka miaraka amin'ny zanany lahy sy ny vinanto vaviny ary ny zanak'izy ireo any Ambanidia izay anisan’ireo fokontany fanta-daza eto an-drenivohitra.
Na teo aza izany fahalemeny izany dia tsy nijanona niasa i Emelie mba hanampiana ny filàn'ny ankohonany. Ho fidiram-bolany dia manao asa fivarotana legioma amin'ny tsena kely izay 10 minitra miala ny tanàna misy azy izy. Mba hahatongavana eny dia baben’ny zanany ao an-damosina isan'andro I Emelie.
Nandritra ny vanim-potoanan’ny fiobohana izay nahitana famerana ny fivezivezena dia sahirana mafy vao nahazo vola i Emelie sy ny fianakaviany. “Ho anay, ny vokadratsiny ara-toekarena dia tena zava-doza bebe kokoa noho ilay valan’aretina. Zara raha nahazo 5.000 Ariary isan-kerinandro tokoa aho mantsy; nisy andro maromaro aza namono antoka mihitsy aho tamin’ireo legioma novarotako mba tsy ho lo izy ireo. Nisy fotoana koa niaraka tamin'ny vinantovaviko aho ary nivarotra fitafiana izahay mba hahazoanay vola kely hividianana sakafo, ” hoy i Emelie.
Ny fianakavian'i Emelie dia isan'ireo nisitraka ny tetik’asa fandefasana vola « Tosika Fameno ». Tsy inona izany fa fandaharan’asa fandefasana vola izay tanterahan’ny governemanta malagasy, entina miatrika ireo hamehana nanomboka tamin’ny volana aprily 2020. Ny tanjona amin’izany dia hanohanana ireo tokantrano marefo izay tena lasibatra tanteraka tamin’ireo fepetra mifanaraka amin’ny hamehana.
Rehefa nihaona taminy izahay tamin'ny volana aogositra dia vao avy nahazo ny andiany faharoa tamin’ilay vola fanampiana mitentina 100 000 Ariary i Emelie sy ny fianakaviany. "Feno fankasitrahana manokana izahay noho io fanampiana ara-tsosialy io", hoy izy taminay, "ilay fanampiana Tosika Fameno dia nampiasainay handoavana ny hofan-tranonay roa volana tsy voaloa, ary nisy ambiny kely aza izany nahafahanay nividy sakafo, indrindra ho an'ny zafikeliko 1 taona. Fandaniana mitovy amin'izany ihany no homaninay amin’ilay fanampiana andiany faharoa ”.
Na eo aza ny fahasahiranana ara-bola mianjady amin'ny fianakaviana, dia be herim-po hatrany i Emelie ary manantena ho avy tsaratsara kokoa. “Rehefa miverina amin’ny laoniny ny toe-draharaha ara-pahasalamana dia mikasa ny hampiasa ny tombom-barotra azoko amin'ny fivarotana aho mba hahafahako miverina any amin'ny dokotera. Amin’izay aho dia afaka manamboatra ny tehiko (béquilles) hahafahako mivezivezy irery indray. Ary amin'izany dia ho afaka manampy ara-bola bebe kokoa ny fianakaviako aho, " hoy izy teo am-pamaranana.
Ny UNICEF dia nanohana tokantrano miisa 8.500 eto amin'ny faritra Antananarivo, tamin'ny alàlan'ny fandefasana vola mitentina 100 000 Ariary (26 $ US) isan-tokantrano. Amin'izao fotoana izao, olona 346 000 any amin’ny tanàna maro tratry ny valan’aretina Covid19 no misitraka ny tetik’asa Tosika Fameno; anisan’izany Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Moramanga, Ambatondrazaka, Fenerive Est, Manakara, Toliara ary Fort-Dauphin.